Betgba nzọ nke Ọma na Egwuregwu Dị Nnọọ Dị Ka 1-2-3 - jluis37.com
Ndị nyocha na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ịkụ nzọ egwuregwu US nwere ike ị ruru $ 7.9 ijeri na afọ 2024. Na ụwa ndị ọzọ anọghịkwa n’azụ. Tụle na ọtụtụ ndị ọkachamara na-eme atụmatụ na ọ dịkarịa ala $100 ijeri na-nzọ kwa afọ na egwuregwu ịkụ nzọ dị ojii ahịa, ugbu a t egwuregwu ịkụ nzọ dị iwu na US, a 7.9 ijeri afọ ntule yiri a mgbanwe na-eme atụmatụ website ntụnyere. Ma ebe ọ bụ na ihe ka ọtụtụ n’ime ndị na-agba chaa chaa na-egwu egwuregwu ga-agakarị n’okporo ụzọ iwu, yabụ ụlọ ọrụ a na-atụkwasị obi na nke na-edozi egwuregwu, mbara igwe dị ka njedebe.
Ọ bụkwa eziokwu na ọtụtụ ndị na-egwu egwuregwu ga-enwe mmasị ịkụ nzọn’egwuregwu, ma ọ bụ egwuregwu ma ọ bụ maka ndụ, mana ha na-ala azụ naanịn’ihi amaghị ebe na etu esi amalite. Nke a bụ ihe nwute n’ihi na mmeri na ịkụ nzọ egwuregwu na-agbadata n’ihe atọ ndị a.
Ha Banyere Uru
The atọ bụ ịrụ ọrụ ike na-eche ihe mara ihe karịa nkezi bookmaker. N’eziokwu, nke a abụghị ọrụ dị mfe. Mana inye ntinye aka na mkpebi siri ike, enwere ike ịme ya. Ebe dị mma ịmalite bụ ịtụle asọmpi ndị ahụ ma ọ bụ asọmpi ndị na-eri akwụkwọ anaghị etinye oge dị ukwuu. Otu ihe atụ nke a ga-abụ ịtụle n’etiti MLB World Series na ọtụtụ puku egwuregwu MLB nke oge ala dị n’etiti. O doro anya na Bookies na-etinyekwu oge na-arụ ọrụ maka nnukwu ihe omume karịa ihe ha na-eme n’egwuregwu pere mpe. Mụta ịchọpụta uru ihe ndị a bara.
Uche Nke Bankroll
Ihe dị ichen’agbata mmeri d e itufu d e ịkụ nzọn’egwuregwu, ọkachasị mgbe ị na-atụle ịkụ nzọ egwuregwu dị ka ụzọ isi bie ndụ oge niile, bụ omume gị banyere ihe ọ pụtara ịhapụ ijide ọrụ na-abụghị ọrụ ịkụ nzọ na egwuregwu maka naanị gị ego.
Nke bụ isi: ịkụ nzọn’egwuregwu maka ibi ndụ abụghị ihe na-adọrọ adọrọ dịka ihe I nwere ike iche. Na ihe doro anya na ọ bụghị, ọ dị mfe ego. Nke a apụtaghị n’ụzọ ọ bụla ka ọ bụrụ nkwupụta okwu na-egbochi mmadụ. Knowingmara na ịkụ nzọ n’egwuregwu n’ụzọ gara nke ọma ga-achọ oge na mbọ dị ukwuu a na-etinye kwa ụbọchị karịa ihe ijidesi ọrụ ọrụ ọfịs ike ike, bụ ihe nzuzo nke imeri na ịkụ nzọ egwuregwu.
Ọzọkwa, ị ga-achọ ezigbo bankroll. Kedu ihe ọzọ, ọkachasị na mbido, ị ga-adị njikere – ma nwee ike! – itinye ihe ngbanye nke bankroll ahụ n ‘ohere iji nweta ihe ị ga-eji bie ndụ.
Iszụ ahịa Bụ Nka
Onye ọ bụla na-agba mgban’egwuregwu ọ bụla maara na ịkụ nzọ bụ azụmahịa. N’adịghị ka azụmahịa ọ bụla, ịkụ nzọn’egwuregwu bụ itinye selfn’ihe ize ndụn’olileanya nke inwekwu self explanatory, makwaara dị ka ịkọ akụkọ uru. Ọzọkwa, ịmara otu esi etinye self kachasị mma website t iji ihe enyemaka dịn’aka gị yana idobe ụgwọ na mmefu dị ka o kwere mee, bụ isi ihe maka azụmaahịa dị mma na isi ihe iji merie na ịkụ nzọ na egwuregwu.